राष्ट्रिय खेललाई स्थापित गराउला ‘डमरुको डण्डिबियो’ले ? – BIG FM 101.2 MHz
आजबाट पोखरा विमानस्थल ३ बजे पछि १५ दिनका लागि बन्द
स्याङ्जा चापाकोट पोखरा मन्चको छलफल तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
नेपालको कफीको पहिचान कायम राख्नुपर्छ:कृृषिमन्त्री खनाल
‘अब पोखरामा रगत अभावको समस्या आउनेछैन’
गण्डकी र हाईनानबीच भगिनी सम्बन्ध:२० जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने
बाँदरको सुकुटी बेच्न पाईयोस
‘पीडित पनि हामी, प्रहरी ज्यादती पनि हामी माथि नै ?’
स्कुल बसको ठक्करबाट वृद्धको घटनास्थलमै मृत्यु
चितुवाको आक्रमणमा परी तनहुँमा चार वर्षीया बालिकाको मृत्यु
भोलिबाट ‘हट एयर’ चढेर घुम्न पाइन्छ पोखरा,हेर्नुहोस कति लाग्छ शुल्क ?
वडा सदस्य क्षेत्री विकासविरोधी भएको आरोप,सदस्य भन्छिन,”आरोप झुठो हो”
प्रदेशलाई सघाउँदै स्विस सरकार
Home » Featured » राष्ट्रिय खेललाई स्थापित गराउला ‘डमरुको डण्डिबियो’ले ?
राष्ट्रिय खेललाई स्थापित गराउला ‘डमरुको डण्डिबियो’ले ?
पोखरा, २१ चैत । नेपालमा अहिले क्रिकेटको चर्चा ह्वात्तै बढेको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाली क्रिकेट टोलीले देखाएको सफल प्रदर्शनले पनि यसको चर्चा दिनानुदिन बढ्दै गएको हो । पछिल्लो समय कलाकार सिताराम कट्टेल उर्फ धुर्मुसले पनि नेपालमा अन्तराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने भन्दै आफ्नो अभियानलाई तिव्रता दिईरहेका छन् । यसले पनि नेपालमा क्रिकेटको माहौल अझै बढाउने काम गरेको छ ।
तर नेपालको राष्ट्रिय खेलको बारेमा पुरै नेपाल बेखबर छ । अझै कतिपयलाई त नेपालको राष्ट्रिय खेल कुन हो ? भन्ने सम्म थाहा छैन ।
डण्डिबियोलाई केहि वर्ष अगाडि मात्रै हो सरकारले राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको । केहि समय पहिलासम्म आक्कलझुक्कल खेलिने यो खेल सरकारले राष्ट्रिय खेलको रुपमा घोषणा गरेपछि त झनै आझेलमा परेजस्तै भएको छ । आजकलका बालबालिकालाई डण्डिबियो भनेको के हो ? भन्ने सम्म थाहा छैन । शायद यो खेलको उल्लेख्य प्रचार नभएकोले पनि यसो भएको हुनसक्छ ।
यद्यपी पछिल्लो समय एउटा नेपाली फिल्मले भने नेपालको राष्ट्रिय खेल डण्डिबियोको प्रचार गर्ने उद्देश्य राख्दै आफ्नो ट्रेलर सार्वजनिक गरेको छ । फिल्मको नाम हो, ‘डमरुको डण्डिबियो’ ।
नेपालमा खेलकुदसम्बन्धि फिल्महरु शायदै बन्छन् । त्यसैमाथि धेरै कम मान्छेलाई मात्र थाहा भएको डण्डिबियो खेलको विषयमा फिल्म बनाएर निर्माण यूनिटले ठुलै चुनौती बोकेको छ । सार्वजनिक ट्रेलर हेर्दा लाग्छ फिल्मको मूख्य पात्र डण्डिबियो खेललाई स्थापित गराउनका लागि सँघर्ष गर्छ । स्पोर्टस् फ्यामिली जनराको ट्रेलरले डण्डिबियोको विशेषता र यसको महत्व पनि देखाउन खोजेको छ ।
फिल्मको मूख्य पात्रमा खगेन्द्र लामिछाने देखिएका छन् । फिल्ममा उनीसँगै बुद्धि तामांग, अनुप बराल, अंकित खड्का, आशान्त शर्मा, लक्ष्मी बर्देवा, मिश्री थापा, इंगि होपू कोइंच सुनवार, नमिता घिसिङ लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । समृद्धि इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा नोर्वु छिरिङ घले र विनोद गुरुङको लगानी छ । फिल्ममा खगेन्द्रकै लेखन, हरि हुमागाँइको छायांकन, निमेष श्रेष्ठ र प्रितम पाण्डेको सम्पादन छ । फिल्मलाई छेतेन गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् ।
बैशाख २१ गते रिलिज डेट तोकिएको स्पोर्टस् जनराको यो फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भएसँगै डण्डिबियो खेलको बिषयमा चासो देखिन थालेको छ ।
हेर्नुस् फिल्मको ट्रेलर :
मनोरन्जन लिउँ:गम्भिर बनौ
व्यवहारिक र रोजगारमुखि शिक्षाको आवश्यकता महशुश सँगै देशमा शैक्षिकनीति परिमार्जनको बहश त चलेकै हो तर …